Umaka: ithelevishini | Martech Zone
Lapho abantu bexoxa ngokukhangisa kwedijithali, bavame ukushiya iziteshi zendabuko zokusakaza ezifana nethelevishini nomsakazo. Kepha inkampani yokusakaza yayizolo ayisasakazeli nje kuphela… bathwebula amamethrikhi wokuzibandakanya nokusetshenziswa kuze kube kowesibili. Konke ukuxhumana okwenzayo kusilawuli kude sakho kuyarekhodwa ukuze kuthuthukiswe kangcono izinhlelo nokubhekisa ukukhangisa. Lokho okwake kwaba yinzuzo yezinsizakalo zokusakaza zesimanje manje sekuhlanganiswa nokukhangisa kwendabuko kwethelevishini. Izindlela ezingcono zokubamba
Baphi Abathengisi Abachitha Imali Yabo Yokukhangisa?
NgoLwesithathu, Okthoba 19, 2016 NgoLwesine, ngo-Okthoba 20, 2016 Douglas Karr
Kubukeka sengathi kunoshintsho olukhulu olwenzekayo ngaphambili kwezentengiso njengoba kumayelana nokukhangisa. Ubuchwepheshe beDijithali buhlinzeka ngamathuba alinganiselayo aqhuba imiphumela emikhulu - futhi abathengisi bayanaka. Bengingeke ngiyichaze kabi le miphumela njengokucabanga ukuthi ukumaketha kwendabuko kuqhathaniswa nedijithali. Kuyindaba yokuba yinkimbinkimbi. Ukukhangisa kuthelevishini, ngokwesibonelo, kuyakhula emandleni ayo okukhomba ababukeli ngokususelwa esifundeni, ekuziphatheni, kanye nesikhathi. I-mindset yokusebenza igcwele
Ukuvala Ukwahlukaniswa Kwendabuko Nedijithali Yokukhangisa
ULwesine, April 14, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 UDanielle Ciappara
Imikhuba yokusetshenziswa kwemidiya ishintshe kakhulu kule minyaka emihlanu edlule, futhi imikhankaso yokukhangisa iyashintsha ukuze ihambisane. Namuhla, ama-dollar esikhangiso asatshalaliswa kabusha kusuka eziteshini ezingaxhunyiwe ku-inthanethi njenge-TV, ukuphrinta, nomsakazo kuya ekuthengeni isikhangiso kwidijithali nakuhlelo. Kodwa-ke, izinhlobo eziningi aziqiniseki ngokwabiwa kabusha kwezindlela ezivivinyiwe neziyiqiniso zezinhlelo zabo zemidiya eziya kwidijithali. I-TV kulindeleke ukuthi isabhekele ngaphezu kwengxenye eyodwa kwezintathu (34.7%) yokusetshenziswa kwemidiya yomhlaba ngo-2017, yize isikhathi